Q.2-aad:Muqdisho Busaarad iyo Baagamuundo Aan hore loo Arag,Warbixino Taxane Ah.
Thursday March 12, 2015 - 19:29:27 in Wararka by Super Admin
Mar walba oo ay shacabka magaalada Muqdisho la kulmaan sicir barar waxay ku baxsan jireen dalagga kasoo go'a wadanka, laakin taas ma dhicin maanta oo waxaa qudheeda ku hor gudban caqabado badan.
Qaar kamid ah dhulkii ugu muhiimsanaa ee wax soo saarka waxaa qabsaday ciidamada shisheeye oo sabab u noqday iney baaba'aan beero badan kadib markii ay dul marsiiyeen karaayaashooda, qaarna ay illaa iyo maanta dul daggan yihiin.
Intaa waxaa dheer in wixii dalag ah ee kasoo go'ay dhulka amniga ee shareecada lagu maamulo ay dowladdu wadooyinka iyo suuqyada uga qaado canshuuro xad dhaaf ah, halka qaadka aan wax canshuur ah laga qaadin, marka laga reebo tan garoonka diyaaradaha looga qaato.
Arintan waxay keentay in sidoo kale uu kor u koco qiimaha dalagga dalka kasoo go'a illaa la gaaray heer ay qaarkood ka qaalisan yihiin raashinka dibadda laga keeno.
Ciidamada shisheeye, hey'adaha iyo qurba joogta ayaa kaalin weyn ku leh qiimo kororka ku yimid maciishadda, sababtoo ah waxay iyagoo lacago badan farraqaya si joogto ah u iibsadaan caanaha, hilibka xoolaha, Kan kalluunka IWM.
In badan oo kamid ah bulshada ku dhaqan magaalada Muqdisho waa shaqo la'aan, waxaana dadka baagamuundada ah u badan ganacsatadii yar yareyd ee suuqyada kadib markii ay waayeen faa'iidadii ay ka heli jireen badeecadooda.
Sidoo kale waxaa dadka camal la'aanta kamid ah macallimiintii dugsiyada qur'aanka oo iyagoo nafsadooda u baqaya iska fariistay iyo kumannaan shaqaalihii dekedda Muqdisho laga eryay ah.
Lasoco Q.3-aad insha'allaah
Guddoomiyihii hore ee baarlamaanka 'Puntland' oo ciidan aruursi ka bilaabay Sanaag.